कश्मीरमा ज्यान गुमाउने सैनिक पत्नीले गरिन एकाएक आ’त्म’ह’त्या — Sanchar Kendra
कश्मीरमा ज्यान गुमाउने सैनिक पत्नीले गरिन एकाएक आ’त्म’ह’त्या
जम्मु कश्मीरमा पाकिस्तानी सेनासँगको भि’ड’न्तमा ज्या’न गुमाएका एक भारतीय सैनिककी पत्नीले आ’त्मह’त्या गरेकि छन् । यो द”र्दनाक घटना भारतको झारखण्डको हो । पतिको श’व घरमा पुग्दा नपुग्दै उनले कुवामा हाम फालेर आ’त्मह’त्या गरेकि हुन्। आ’त्मह’त्या गरेकि मनीता उराँवका पति बजरंग उराँव फौजमा कार्यरत थिए । कश्मीरमा डिसेम्बर ३० मा पाकिस्तानीसेना सँगको भि’ड’न्तमा उनको ज्यान गएको थियो। मृ’त बजरंगको श’व गाँउ पुर्याइएसँगै बेहोस बनेकि पत्नीले आ’त्म’हत्या गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। भारत-पाकिस्तानबीच कश्मीर मामिलालाई लिएर विवाद जारी रहँदा दुवैतर्फ अनाहकमा सैनिकहरुले ज्या’न गुमाउने गरेका छन्। बुधबारमात्रै गो’ली हा’ना’हान हुँदा भारतीय सेनातर्फ नेपालको गोरखा रिप गाउँका २५ वर्षीय अर्जुन थापामगर र भारत महाराष्ट्र राज्यअन्तर्गत सतराका २९ वर्षीय सावन्थ रघुनाथले ज्यान गुमाएका थिए।
साँझ-बिहान घरको काम गर्थिन्, दिउँसो श्रीमानले कोठी छाडिदिन्थे
घटना दुई महिना अघिको हो, नेपाल भारत सीमा क्षेत्र रुपन्देहीको भगवानपुर नाकाबाट भारत जाँदै गरेका दुई महिला र दुई किशोरीलाई भारतीय प्रहरी एसएसबीले सीमा क्षेत्रमै रोक्यो। मंगोलियन अनुहारका किशोरीहरू तराई मूलका महिलाको साथमा सीमापार गर्दै गरेको देखेपछि एसएसबीले सोधपुछ गरेको थियो। सुधपुछको क्रममा सुरूमा आमा र छोरीहरू बताए पनि अनुहार र बोलीचाली नमिलेपछि एसएसबीले बेलहियामा रहेको माइती नेपालको जिम्मा लगायो। सोधपुछ गर्दै जाँदा रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाका चौधरी थरका दुई महिलाले कक्षा ८ मा पढ्दै गरेका गाउँकै दुई किशोरीलाई प्रशस्त धन कमाउने प्रलोभन देखाएर भारत लैजान थालेको पत्ता लाग्यो।
विद्यालय पोशाकमै आएका किशोरीलाई ती महिलाहरूले नातिनीको कपडा लगाएर सीमा पार गराउनै लाग्दा निगरानीमा परे। अहिले उनीहरूविरूद्ध सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलिरहेको छ। गत कात्तिक १५ गते भारतको मुम्बईबाट पाँच जना महिला र बालिकाको उद्धार गरी नेपाल ल्याइयो। तीमध्ये एक जना २२ वर्षीया महिलालाई दुई वर्षीय छोरीसँगै उद्धार गरिएको थियो। चितवन भरतपुर घर बताउने उनी विगत ३ वर्षदेखि श्रीमानबाटै मुम्बईमा देहव्यापारमा गर्दै आएकी थिइन्। उनलाई श्रीमानले देहव्यापार गर्न लगाएको बताउँथिन्।
भारतीय व्यक्तिसँगै विवाह गरेकी उनी साँझ बिहान घरमा आउँथिन् अनि काम गर्थिन् भने दिनभरि देह व्यापारको लागि श्रीमानले नै कोठीमा लगेर छोडिदिन्थे। ‘साँझ बिहान घरको काम गर्थें, दिउँसो श्रीमानले कोठीमा छोडिदिन्थ्यो,’उनले भनिन्। उनलाई महिला तथा चेलिबेटी बेचबिखनविरूद्ध भारतमा काम गर्दै आएका संघसंस्था र भारतीय प्रहरीको सहयोगमा नेपाल ल्याइएको थियो। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। राम्रो जागिर लगाइदिने र प्रशस्त पैसा कमाउने प्रलोभनमा परी नेपाली महिला तथा किशोरीहरू आफन्त तथा गाउँघरकै व्यक्तिबाट देह व्यापार तथा जोखिम कामको लागि बेचिएका छन्।
रुपन्देहीस्थित माईती नेपालको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा सीमा क्षेत्रबाट र भारतबाट उद्धार गरी ल्याइएका महिला तथा बालबालिकाको संख्या उस्तै रहेको छ। माईती नेपालका रुपन्देही संयोजक माया क्षेत्रीले खुला सीमा नाका कारण सीमा क्षेत्रमा निगरानी भइरहे पनि प्रभावकारी नभएको बताउँछिन्। चार वर्षको अवधिमा मात्र झण्डै एक हजार एक सय महिला तथा बालबालिकालाई सीमा क्षेत्रबाटै उद्धार गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ।
त्यस्तै, भारतका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरी ल्याइएका एक सय चार जनालाई पनि आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २ सय ८९ जनालाई सीमा क्षेत्र र ३५ जनालाई भारतका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरी ल्याइएको थियो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सीमा क्षेत्रबाट २ सय ५० र भारतबाट ९ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ०७४/०७५ मा सीमा क्षेत्रबाट २ सय ७२ र भारतबाट १० जनाको उद्धार गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा भारतीय क्षेत्रबाट उद्धार गरिएकाको संख्या ५० रहेको छ। त्यस्तै, सीमा क्षेत्रबाट २ सय ५३ जनाको उद्धार गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा पनि सीमा क्षेत्रबाट ८१ जना र भारतका विभिन्न स्थानबाट ७ जनाको उद्धार गरिएको छ। यो संख्या माईती नेपालको सम्पर्कमा आएकाहरूको मात्र हो।
रुपन्देहीमा एबिसी नेपाल, साना हात, आफन्त नेपाल, थ्रि एन्जल्स, शुभअवसर ग्राम र माईती नेपालले मानव बेचबिखनविरूद्ध काम गर्दै आएका छन्। तीमध्ये चार वटा संस्थाले सीमाक्षेत्रमा निगरानी समेत गर्दै आएका छन्। तर एउटै अभियानमा काम गर्ने संघसंस्थाका बीचमा समेत समन्वय र सहकार्य नहुँदा समस्या यथावत् रहेको छ। मानव बेचबिखनवि’रू’द्ध काम गर्दै आएका संघसंस्था र नेपाल प्रहरी समेत बेलहिया नाकामा मात्र सीमित रहँदा मानव तस्करहरूले रुपन्देहीका अरु नाकालाई प्रयोग गर्न थालेका छन्।
रुपन्देहीका माईती नेपालका कार्यक्रम संयोजक क्षेत्रीले सीमा क्षेत्रमा निगरानी हुन थालेपछि एजेण्टहरूले सीमा पारिसम्म हिँडेर नै पठाउने गरेको बताइन्। प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल, ईमेल, इन्टरनेटको प्रयोगका कारण पनि महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन्। घरपरिवारसँग बेमेल भएका, घरेलु हिंसामा परेका र छिटो पैसा कमाउने सपनादेखि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरू बढी मात्रामा बेचबिखनमा पर्ने गरेको क्षेत्रीले बताइन्।
कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ ‘स्मार्ट लकडाउन’ ? अब यी क्षेत्रहरु खोल्न दिइने
ओली सरकारमा गएका जसपाका यी ९ मन्त्रीलाई किन निकालियो, यस्तो रहेछ कारण
जहाँ आफ्नो घर बगाउने पालो कुरेर बसिरहेका छन् घरधनी
नेपालको नाम लिँदै डब्लुएचओले यसो भनेपछि विश्वभर तरंग
के हो सरकारले जारी गर्ने भनिएको ‘स्मार्ट’ लकडाउन ?
अब ‘स्मार्ट लक डाउन’ गर्ने सीसीएमसीको निर्णय